Hamba uye kuHeights Theatre/Iirestyu/kwiivenkile
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKatrina
UKatrina unezimvo eziyi-299 zezinye iindawo.
Inkulu kunye ne-airy 6BR, i-4.5BA Heights ikhaya elineendawo ezininzi eziqhelekileyo nezingaphandle. Umnini ngumyili wangaphakathi othanda ubugcisa, ukuphumla kunye neendawo ezibekwe kakuhle.
Sikweyona nxalenye ilungileyo yeeHeights kudityaniswa indawo ezolileyo yabamelwane kunye nabamelwane abakhulu kodwa umgama wokuhamba ngalo lonke uhlobo olulula. Sikwiyadi yangasemva yekofu yethu esiyithandayo, ibrunch kunye nesidlo sangokuhlwa kwaye kufutshane nezinye zeevenkile ezizodwa zasekuhlaleni, zonke kwi-W. 19th Street!
Ilungele ukudibana kosapho kunye nomhlobo.
Ikhaya elikhulu, elizolileyo kwindawo enqwenelekayo. Uninzi lweendawo eziqhelekileyo kunye neendawo ezingaphandle ukuze wonke umntu abe nendawo yabucala okanye onwabele ixesha kunye. Kanye apha, yeka imoto, ukunqaba kweHouston. Hamba uye kweyona nto ingcono kuyo yonke into-- kuquka nomculo ophilayo--ngaphakathi kweebhloko ezimbini!
Izinto esizithandayo phakathi kweebhloko ezimbini:
Big Blue Whale - zokudlala kunye nezipho
Thina Olive - iwayini kunye tapas bar
Ukunyotywa okumnandi - utywala/iicecream
I-Alice Blue Restaurant
Indawo yokutyela ephantsi kweNdlu
ICigar Bar Lounge
I-Lift - iincwadi kunye nezipho
Jubilee - impahla yasekhaya kunye nezipho
Heights Theatre - umculo live
Igumbi lempompo likaHarold's - ibha kunye nendawo yokutyela
I-Torch's Tacos kunye nebar
Ikhaya liya kuba leleendwendwe kuphela; imihlaba iya kunikezelwa ngenkonzo ngexesha lokuhlala kwaye abasebenzi bayafumaneka ukuze bancede xa kuyimfuneko. Ngokuqhelekileyo ndifumaneka ngefowuni / isicatshulwa kwizicelo ezikhethekileyo, ngaphandle koko zama ukuvumela iindwendwe zive ngathi "zihlala" apho kwi-Heights.
Ikhaya liya kuba leleendwendwe kuphela; imihlaba iya kunikezelwa ngenkonzo ngexesha lokuhlala kwaye abasebenzi bayafumaneka ukuze bancede xa kuyimfuneko. Ngokuqhelekileyo ndifumane…